Shariif oo balan-qaaday inuu la shaqaynayo dawladda cusub, ciidankana ku amray inay ka amar-qaataan madaxwaynaha cusub – Radio Daljir
Seteembar 10, 2012 1:54 g 0
Moqdisho, Sept, 11 -? Madaxwaynihii hore ee Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed ayaa khud-bad ka jeediyay madasha doorashada, waxaana uu mahad-ballaaran u jeediyay madaxwaynaha cusub ee Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud, iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed.
Madaxwayne Shariif Shiikh Axmed oo khudbadiisa sii-wata ayaa yiri “Way iga go’antahay inaan la shaqeeyo madaxwaynaha cusub, maxaa yeelay anba waxaan doonayay in layla shaqeeyo”.
Mudane Shariif Sh. Axmed ayaa arrin taariikhi ah ku tilmaamay in caasumada Soomaaliya ee Moqdisho ay ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal ah, waxaana arrintaasi uu ku tilmaamay mid taariikhda baal-dahab ah ka galaysa.
“Dhammaanay qaybaha ciidamada qalabka sida ee dawladda Soomaaliya, iyo ciidamada AMISOM waxaan ku boorinayaa inay laga bilaabo saacadaan ka amar-qaataan madaxwaynaha cusub ee Soomaaliya mudane Xassan Shiikh Maxamuud, waan ogahay wali inaanan samaynin xil-wareejin toos ah, balse waxaan ka digayaa cid-kasta oo isku dayi-karta inay amniga iyo xasiloonnida khal-khal-galiyaan” Sidaasina waxaa yiri Shariif Shiikh Axmed.
Ugu dambayntii madaxwaynihii hore ee Soomaaliya Shariif Shiikh Axmed oo hadal-kaftan ah ka jeediyay madasha doorashada ayaa yiri “Waan ogahay inaanan u mahad-celin baarlamaanka Soomaaliya, sababtana waad garanaysaan, waan salaamayaa intii i dooratay, iyo xildhibaannada kaleba”
Khudabada madaxwayne Shariif Shiikh Axmed ayaa ahayd mid qiiro-huwan, waxaana uu muujiyay kalsoonnida uu kula shaqayn-doono dawladda cusub ee Soomaaliya u curutay.